Hadalka Raysulwasaare Khaire maxaa lagu macnayn karaa?! - Ahmed Abdihadi
Hadalka Raysulwasaare Khaire maxaa lagu macnayn karaa?!
Ma ahayn markii u horraysay ee uu raysul Wasaare Xasan Cali Khaire si cad uga hadalo in dalka ay ka dhacdo doorasho loo dhanyahay oo xilligeedii dhacda.
Bilo ka hor ayuu sidan oo kale u hadlay walow ay tii shalay ahayd mid ka sii xoog badan, kana cad.
Inta aan ka xasuusto hadalada Raysulwasaare Khaire waa labada jeer ee uu si miisaan siyaasadeed leh oo qofkasta oo xil u haya dal sida Soomaaliya oo kale siyaasan u jilicsan u hadlay.
Habeen ka hor wuxuu raysulwasaaruhu ka qaybgalay kulan xafiiska madaxweynuhu soo agaasimay oo Khadiija Diiriye, Maareeye iyo Bashiir Goobe billad sharfyo lagu siiyay doorkii ay qaateen agaasinta maalmalaha xorriyada, iyo midowga.
Sawirro laga soo qaaday xafladda oo baraha bulshada la wareejinyo farxad badan ka muuqanin Raysulwasaaraha.
Waxaan is iri ma isku rayi ayaad ka tihiin macna darrada munaasabadda iyo xilliga ay ku soo aadday.
Qodobka koobaad ee aan isla garan karno wuxuu yahay in hadalka Raysulwasaarahu ahaa mid baahi loo qabay, caddeeyayna in uusan shuraaka ku lahayn madaxwene Farmaajo iskuday kasta oo muddo kororsi .
Sidoo kale, haddii hadalkan uu ficil u beddalo R. Khaire, waxaa ka haraya eeddii ahayd ma qaadanin doowr siyaasi. Caadi ahaan dadka naqdiya Khaire waxay yiraahdaan Khaire sida agaasimi oo kale ayuu ugu shaqeeyaa Farmaajo ee sida siyaasi awood qaybsi ku fadhiya uma shaqeeyo.
Naqdigan waa laga difaaci karaa oo macal madaxweynaha qof siyaasad ka shaqeeya Nabab iyo Nolal wali xeradooda ma soo galin. Waxaa daliil u ah afartii sano ee la soo dhaafay dagaal iyo koox hebel xidida u siib ayay kaga dhammaatay. Maanta qof ay heshiis la yihiin ma jiro.
Maalin dhawayd oo ay suuqa ku jirtay in raysulwsaare khaire la beddeli rabo ayaan la sheegaystay siyaasi rug caddaa ah. Wuxuu igu yiri cid uu Farmaajo ku beddelo Khaire ma hayo maxaa yeelay qof uu heshiis la yahayaba ma jiro waa marka laga hadlyo quwadaha siyaasadeed. Hadalkaas aad ayuu ii soo jiitay.
Arrinta ugu fiican waxay tahay xilliga hadalka Raysul wasaaruhu ku soo aaday. Haddii uu dalka dhaafiyo xaaladan kala guurka ah wuxuu noqon doonaa nin dhaxal fiican ka tagay.
Hadalka xafiiska Madaxweyne ah ka soo baxay ma mid qorshaysan ayuu ahaa misa ka daba-tuur?!
Fahankayga mid qorshaysan ma ahayn. Arrinta koobaad ee tilmaamaysa sidaas waxay tahay siiqada ay warqaddu u qornayd. Tusaale “ soo dhawayn” waxaa la soo dhaweeyaa wax aadan qorshihiisa waxba ka ogayn laakiin aad u bogtay. Marka, Madaxweynuhu golaha wasiiradda tallaabadooda waa uu boggay ee lama ogayn ayaa loo fahmi karaa.
Arrinta labaad waxay tahay hadalada uu khaire isticmaalay ee ah doorasho xilligeedii aan dhaafay oo loo dhanyahay oo aysan xabbad humaag ah ku jirin, halka kuwa Farmaajo humaag badan uu ku jiro sida doorasho “shacabka loo dhaweeyo oo dastuurka waafaqsan”.
Nuxurku wuxuu yahay haddii Khaire dalka dhaafsiiyo kala guurka, gacan ka hadal la’aan wuxuu noqon karaa siyaasi weyn oo ixtiraam iyo mudnaan siyaasadeed yeelan kara. Waxaana suurtagal ah in xilliga hadda uu ku soo aaddiyay arrintan ay tahay billowga olole siyaasadeed oo uu madaxnimo ku rabo.
Maxay kula tahay adiga?!
Puntland ma maamul goboleed-baa misa waa dowlad madaxbannaan!